1 drop,2drops,3drops ပြစ်ချက်အားလုံးဖုံးသွားပြီ!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » 1 drop,2drops,3drops ပြစ်ချက်အားလုံးဖုံးသွားပြီ!!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ အပြစ်အနာအဆာ သေးသေးလေးမှ အကြီးကြီးထိ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မယ့် အလန်းစား Match Made Custom Blend Foundation Drops နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Foundation Drops ကို အရောင် 25 ရောင်အထိ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိမိနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ အရောင်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိမှာရှိနေတဲ့ Foundation အရောင်က မိမိနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိလို့စိတ်ညစ်နေရတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီ Drop လေးနဲ့ ရောစပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အသားအရောင်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးအထိ ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ အပြင်က မဟုတ်ပဲ Online က တဆင့်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးအရောင်ကို ရွေးခြယ်ဖို့တော့လိုမယ်နော်။
နောက်တချက်အနေနဲ့ကတော့ တချို့မိန်းကလေးတွေဟာ Coverage ဖြစ်ချင်ပေမဲ့ သဘာဝအတိုင်းလေးဖြစ်ချင်တယ်။ Coverage အပြည့်အဝဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက် အထူးကိုက်ညီပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်းလေးနဲ့ လှနေချင်တယ်ဆိုရင် 1 Drop, အရမ်းကြီးလည်း မထူ အရမ်းကြီးလည်း မပါးချင်တဲ့သူတွေအတွက်2Drops, လုံးဝ Coverage ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်3Drops တိုင်အောင် အသုံးပြုပေးရုံပါပဲ။
အသုံးပြုတဲ့အခါ အရင်ဆုံး လက်ဖမိုးပေါ်အစက်ချပြီး မိမိ အသုံးပြုနေကျ Primer ဒါမှမဟုတ် Cream တမျိုးမျိုးနဲ့ သမအောင် ရောနှောပြီး ဖုံးအုပ်လိုတဲ့နေရာလေးတွေကို အရင်ဆုံးအသုံးပြုပြီးမှ တမျက်နှာလုံး လိမ်းခြယ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ပြစ်ချက်ကင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့။
အသုံးမပြုခင်တော့ Shake well လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 15 $ ကျသင့်ပြီး ဝယ်ယူလိုပါက နိုင်ငံခြား ပစ္စည်းတွေမှာယူရရှိနိုင်တဲ့ Scarlet Online Shop တို့ကတဆင့်မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။